हर्निया भनेको के हो ? जान्नुहोस् यसका लक्षण र उपचार | | Uwjalkhabar
हर्निया धरैजसो पेटमा हुने दुखाई हो तर कुनै कुनै अवस्थामा यो फिलाको माथिल्लो भाग , नईटो र कम्मरको वरिपरी पनि हुन सक्छ । हर्निया सामान्य त ज्यानलिने समस्या होइन तर यसको मतलब यो होइन कि यो आफै निको हुन्छ । कुनै कुनै हर्निया भएको अवस्थामा धरै खतरा भएर सर्जरी समेत गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
खास हर्निया भनेको के हो त ?
जब एउटा मासपेशीबाट कुनै दुलोको सह्येताले भित्रको अंग बाहिर निस्कन थाल्छ त्यस अवस्थालाई हर्निया भनिन्छ । शरीरको क्यावीटिको जालीहरु जब फुट्न थाल्छन् तब शरीरको केहि अंग बाहिर निस्कन थाल्ने गर्छन र यस्लाई नै हर्निया भनिन्छ । हाम्री शरीर भित्र कुनै अंगहरु खोक्लो ठाउँमा अवस्थित हुन्छन् । यही खोक्लो स्थानहरुलाई शरीरको क्यविटि भनिन्छ । यो शरीरको क्यविटि छालाले ढाकिएको हुन्छ । अनि जब यो कुनै कारणले फाट्न थाल्छ तब केहि अंग बाहिर निस्कनु थाल्छ र शरीरलाई अप्ठेरो हुन्छ । येहि भएको अप्ठेरोलाई नै हर्निया भनिन्छ । हर्नियाको समस्या सामान्य त पेटमा हुने गर्छ । धरैजसो हर्निया ज्यानको लागि खतरा हुदैनन् ।
के कस्ता छन् त हर्नियाको लक्षणहरु ?
जुन ठाउँमा हर्निया भएको छ त्यो ठाउँ सुनिन थाल्ने गर्छ । त्यो भागमा सुनिएको कारणले दुख्न र झमझम भएको महसुस हुन्छ । हर्नियाको खासै तेस्तो लक्षण भने छैन । केवल त्यहि सुनिने र सुनिएको ठाउमा दुखाईको महसुस हुनेलाई नै हर्नियाको लक्षण मान्न सकिन्छ । यस्तो प्रकारको दुखाई उभ्दाखेरि, हर्निया भएको ठाउँको मासु छुदाखेरि र भारि सामान उठाउदा हुने गर्छ भने त्यो दुखाई हर्निया भएको कारण हुन सक्छ ।
हर्निया कति प्रकारको हुन्छ ?
हर्निया धरै प्रकारको हुन्छ । सबै हर्नियाहरु मध्य इनगुइनल हर्निया सबै भन्दा सामान्य प्रकारको हर्निया हो । महिलाहरुको तुलनामा हर्निया धरैजसो पुरुषमा देखिने गरेको छ । सामान्य त हर्नियाको ३ प्रकार हुन्छन् र ती हुन्- वेक्षण हर्निया(इग्वैनल हर्निया), नाभी हर्निया(अंविलाइकल ) र फिमोरल हर्निया । यी सबै हर्नियाको उपचार सम्भव छ ।
हर्नियाको उपचार कसरी गर्ने ?
कुनै रोगको हर्नियाको उपचार जरुरि छ कि छैन भन्ने कुरा यसको लक्षण र लक्षणको गम्भीरताले जनाउछ । हर्निया जुनै उमेरको मान्छेलाई पनि हुन सक्छ । यो बच्चादेखि लिएर बुडाबुडी जसलाई पनि हुन सक्छ । हर्नियाको उपचार दुरबिनद्वारा हुने एउटा छोटो अपरेसन बाट गर्न सकिन्छ । यसको अरु उपचार भनेको, स्वास्थ्य जीवनशालि अपनाउने, डाक्टरले दिएको औसधिको सेवन गर्ने र सर्जरी गर्ने हुन् ।